क्वाङ्ग तुङ्ग साँस्कृतिअन्तर्गत विदेशमा बसोबास गर्ने चिनियाँ मूलका विदेशीको जन्मथलो - China Radio International
क्वाङ्ग तुङ्ग साँस्कृतिअन्तर्गत विदेशमा बसोबास गर्ने चिनियाँ मूलका विदेशीको जन्मथलो
(GMT+08:00) 2013-06-21 15:53:44
दक्षिणी चीनमा पर्ने क्वाङ तुङ प्रान्तीय च्याङ्ग मन शहरमा सिनह्वि, खाइ फीङ, थाइशान, एनफीङ र हशना पाँच क्षेत्र रहेका छन्। चीनमा च्याङ मन शहर विदेशमा बसोबास चिनियाँ मूलका विदेशीको पहिलो जन्मथलो मानिन्छ। थाङ वंशदेखि सिनह्वि क्षेत्रीय बासिन्दाले अरबेली व्यापारीसँग विदेश गएको लेखिएको छ। अहिले विश्वव्यापी मुलुकमा बसोबास गर्ने चिनियाँ मूलका विदेशीहरुसँग गफ गर्दै यिनीहरुमध्ये अधिकाँशले क्यान्टोनिज भाषाद्बारा "म क्वाङ तुङबाट आएको हुँ।" भन्छन्।
आज हामी सँगसँगै विदेशमा बसोबास गर्ने चिनियाँ मूलका विदेशीको जन्मथलोतर्फ जाऔं। अनि त्यहाँ गएर स्थानीय रितिरीवाजको अनुभव पनि गरौं।
तथ्याङ्कअनुसार विदेशमा बसोबास गर्ने क्वाङ तुङ मूलका विदेशीको सङ्ख्या तीन करोड पुगेर सबै चिनियाँ मूलका विदेशीको सङ्ख्याको 67 प्रतिशत पुगेको छ। यिनीहरु विश्वव्यापी एक सय 60 मुलुक तथा क्षेत्रमा फैलिएका छन्। विदेशबाट चीन फर्कने एक लाख तीन हजार चिनियाँ मूलका विदेशीहरु र यिनीहरुका वरिपारका दुई करोड सदस्य अहिले क्वाङ तुङ प्रान्तमा बसेका छन्।
टाढा विदेशमा बसोबास गर्ने चिनियाँ मूलका विदेशीहरुले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुका साथै साँस्कृतिक मतभेद र जातिभेदका हुनाले मनमा दुःख लाग्यो। धेरै वर्षको प्रयासमा केही चिनियाँ मूलका विदेशीहरुले केही छु्ट्टा-छुट्टै पसलको स्थापना गरेर यी पसलहरु भेला भएर क्रमशः चाइना-टाउन बनेको छ। साथै यिनीहरुको विप्रेषण पनि जन्मथलोमा पठाएर स्थानीय आर्थिक विकासलाई बढाएका छन्।
विदेशमा बसोबास गर्ने चिनियाँ मूलका विदेशीहरुले सन् 1911को सिनहाइ क्रान्तिका लागि भौतिक समर्थन दिएका थिए। जापानविरोधी युद्धका बेलामा यिनीहरले चन्दास्वरुप रकम र सामग्री दिने आदि तरिकाद्बारा मातृभूमिलाई समर्थन र माया दिएका थिए। त्यसपछि यिनीहरुले नयाँ चीनको आर्थिक तथा सामाजिक निर्माणका लागि पनि महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। सन् 2011 सम्म क्वाङ तुङ प्रान्तले वास्तविक रुपमा प्रयोग गर्ने विदेशी पूँजी कूल करीब दुई खर्ब 70 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। त्यसमध्ये 70प्रतिशत हङकङ र मकाउमा चिनियाँहरु र विदेशमा बसोबास गर्ने चिनियाँ विदेशीहरुबाट आएका छन्। साथै क्वाङ तुङ प्रान्तमा चिनियाँ मूलका विदेशीहरुद्बारा लगानी गरिने व्यवसायको सङ्ख्या 55 हजार5सय भएर सबै विदेशी लगानी गर्ने व्यवसायको 60प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। युग परिवर्तन भए तापनि यिनीहरुले सधैं नै मातृभूमिलाई गहिरो रुपमा माया गरेका छन्।
सन् 2010को अन्त्यमा "Let The Bullets Fly" नामक चलचित्रले ब्लाक ह्युमर र हिंसात्मक सौन्दर्यको विशेषताद्बारा धेरै दर्शकलाई आकर्षित गरेको थियो। चलचित्रमा बङ्कर जस्तो घरआवासले पनि दर्शकलाई गहिरो छाप दिएको छ। यो क्वाङ तुङ प्रान्तमा प्रसिद्ध आवास—खाइ फीङ द्याउ लौ हो।
खाइ फीङ द्याउ लौ क्वाङ तुङ प्रान्तीय चिनियाँ मूलका विदेशीको जन्मथलोमा आवासको प्रतिनिधि हो। यस आवासले भवनको प्रकार र बङ्करको प्रतिरक्षा कार्यलाई राम्ररी मिलेको छ। छिङ्ग वंशमा धेरै स्थानीय युवाहरु टाढा अमेरिका गएर पैसा कमाएका थिए। यिनीहरुले मेहनती बनेर काम गर्दै पैसा जन्मथलो पठाएका थिए। अर्कातिर विदेशमा व्यापार गर्ने केही धनी चिनियाँ मूलका विदेशीहरु वृद्ध भएर जन्मथलो फर्केका थिए। यी चिनियाँ मूलका विदेशीहरु र उनीहरुका परिवार डाँकूको लक्ष्य बने। त्यसबेला लोकप्रिय क्षेत्रमा एक कोइलापछि तीन डाँकू भएको भनाइ फैलेको थियो। यस भनाइको अर्थ हरेक चिनियाँ मूलका विदेशीपछि तीन डाँकू लागेका हुन्छन्। उक्त भनाइले तत्कालीन सामाजिक सुरक्षाको खतरा उल्लेख गरेको छ। खाइफीङ शहरीय बासिन्दा श्री छनले यसरी जानकारी दिनुभयो—
"त्यसबेला ती डाँकू ज्यादै खतरा थिए। राति नभए हामी द्याउ लौमा लुक्थ्यौँ।"
डाँकूबाट प्रतिरक्षा गर्न स्थानीय बासिन्दाहरुले द्याउ लौ अर्थात बङ्कर जस्तो घरआवासको निर्माण गरेका थिए। साथै खाइ फीङको भूभाग निम्न हुनुका साथै धेरै नदी भएका हुनाले वर्षा भएमा सजिलै बाढी प्रकोपमा पर्न सक्थ्यो। बहु-तले भवन निकै दृढ हुनुका साथै पानी निष्काशन गर्ने क्षमता पनि राम्रो छ। पश्चिमी विशेषतायुक्त द्याउ लौ अर्थात बङ्कर जस्तो घरआवास चिनियाँ मूलका विदशीको जन्मथलोमा एउटा प्रतिनिधि चिन्ह बनेको छ।
हवस्त श्रोता, आजको कार्यक्रम यति नै। अब म श्रोतासमक्ष तीनवटा प्रश्न राख्छु। -
1- विदेशमा बसोबास गर्ने चिनियाँ मूलका विदेशीको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी भएको प्रान्त कुन हो?
2- चीनमा मानिएको विदेशमा बसोबास चिनियाँ मूलका विदेशीको पहिलो जन्मथलो कहाँ छ?
3- किन खाइफिङ क्षेत्रमा धेर द्याउ लौ अर्थात बङ्कर जस्तो घरआवासको निर्माण गरिएको छ?